အိုင်ဖုန်း နဲ့ ဆင်တူတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားထုတ်ဖုန်း - DigitalTimes.com.mm
Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Share on Facebook Share on Twitter + 11 Shares
186 Views Home NEWS Local HOW TO FEATURES Knowledge Interview Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Random Download Android iOS Window FUNNY PHOTOS HUBS Android Apple Samsung Knowledge Mobiles & Tablets NEWS Others Tech Updateအိုင်ဖုန်း နဲ့ ဆင်တူတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားထုတ်ဖုန်း
zayarsan Jun 27, 2017 11 186
အတွင်းပိုင်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကို တစ်ခု မှမဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဆင်တူလှတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို မြောက်ကိုးရီးယား က ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဲဒီဖုန်း ဟာ အမည်နာမ၊ အတွင်းပိုင်း Specs၊ ရောင်းချမယ့် ဈေးနှုန်း စတာတွေကို တစ်ခုမှ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မျက်မြင်သွင်ပြင် နဲ့ ရုပ်ပိုင်းလက္ခဏါတွေအရ အိုင်ဖုန်းရဲ့ ဗားရှင်းအသစ် နဲ့ ဆင်တူလွန်းလှတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အမည်နာမတွေကို ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပေမယ့် သတင်းသမားတွေ ရဲ့ စုံစမ်းမှုအရ အဲဒီဇုန်းကို Jindallae3လို့ အမည်ခေါ်တွင်ပြီး အတွင်းပိုင်း မှာ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သွင်းထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဇုန်းကို DPRK’s Mangyoungdae Information Technology Corporation က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ကနဦး အနေနဲ့ မတ်လအတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ အခု အပတ်အတွင်းမှာမှ အွန်လိုင်းကို လွှတ်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဖုန်း မှာ ဂဏန်းပေါင်းစက်၊ အင်တာနက် ဘရောက်ဇာ၊ Music Player တွေ အပြင် ဖုန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပြင် Trump’s Style Card ဂိမ်းတွေ လည်း ပါရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Ref : DM
Previous articleMeizu က Nougat တင်လို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်း စာရင်းကို ကြေညာ
Next articleဖုန်းနံပါတ်များ ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး မှ အကြောင်းကြားထား
You may be interestedAudio & Video, cameras, FEATURES0 shares0 viewsစူပါ စစ်သာများ ဖန်တီးဖို့ အမေရိကန်စစ်တပ်က တီထွင်နေတဲ့ နည်းပညာ (၈) ခုKo Thuya - Jul 25, 2017အမေရိကန် စစ်တပ်က Captain America နဲ့ Iron Man တို့လို စူပါ ဟီးရိုး စစ်သားများကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဌာနက သာမာန်လူတွေထက် အင်အားကြီးမားတဲ့ စစ်သားများကို အလိုရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ နာကျင်မှု…Gadgets, HUBS, Local93 shares83 viewsအူရီဒူး ရဲ့ နည်းပညာ အသစ် SIT Trunk အကြောင်းzayarsan - Jul 25, 2017စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြိုက်ဖြစ်မေယ့် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခု ကို အောရီဒူး က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အူရီဒူး ဟာ သူရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ Session Initiation Protocol (SIP) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအား အကန့်သတ်မရှိ တစ်ပြိုင်နက်ထဲဖုန်းလက်ခံနိုင်ခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကို ဒီကနေ့ပဲ စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်တယ် လို့…Gadgets, Gadgets, HUBS385 shares174 viewsခေါက်ချိုး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Lenovo ရဲ့ တက်ဘလက်Ko Thuya - Jul 25, 2017Lenovo က ခေါက်ချိုးနိုင်တဲ့ စကရင် တပ်ဆင်ထားတဲ့ Concept Device တစ်ခုကို ပြသလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Lenovo Tech World မှာ ကုမ္ပဏီက ထက်ဝက်ခေါက်ချိုး၍ ဖုန်းလို သုံးနိုင်တဲ့ Lenovo Folio အမည်ရ…Most from this categoryNEWS, Security & Safety, Softwares & Application252 shares44 viewsတရုတ်က ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မယ့် လူများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းKo Thuya - Jul 25, 2017Mobiles & Tablets, NEWS764 shares597 viewsXiaomi Redmi Note4မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားKo Thuya - Jul 25, 2017Apple, Drone, HUBS518 shares266 viewsiphone9အတွက် ဘက်ထရီကို LG မှ ထုတ်လုပ်ပေးမည်zayarsan - Jul 24, 2017Apple, Gadgets, HUBS11 shares58 viewsiphone9အတွက် ဘက်ထရီကို LG မှ ထုတ်လုပ်ပေးမည်zayarsan - Jul 24, 2017 Our Picks NEWS, Security & Safety, Softwares & Application252 shares44 viewsတရုတ်က ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မယ့် လူများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းKo Thuya - Jul 25, 2017Mobiles & Tablets, NEWS764 shares597 viewsXiaomi Redmi Note4မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားKo Thuya - Jul 25, 2017Apple, Drone, HUBS518 shares266 viewsiphone9အတွက် ဘက်ထရီကို LG မှ ထုတ်လုပ်ပေးမည်zayarsan - Jul 24, 2017Most Popular
စူပါ စစ်သာများ ဖန်တီးဖို့ အမေရိကန်စစ်တပ်က တီထွင်နေတဲ့ နည်းပညာ (၈) ခု Jul 25, 2017အူရီဒူး ရဲ့ နည်းပညာ အသစ် SIT Trunk အကြောင်း Jul 25, 2017ခေါက်ချိုး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Lenovo ရဲ့ တက်ဘလက် Jul 25, 2017တရုတ်က ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မယ့် လူများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း Jul 25, 2017Xiaomi Redmi Note4မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား Jul 25, 2017 Get the best viral stories straight into your inbox!
TagsAndroid Apple APPS asus Automobiles CAMERAS Cars computer Facebook feature features GADGETS galaxy note series games GAMING Google Huawei ios iPhone iPhone/ iPad issue knowledge LG local Microsoft mobile mobile devices Mobile Games MOBILES mpt news Ooredoo PC/LAPTOPS samsung SCIENCE smart devices smartphones SOCIAL MEDIA Sony TABLETS technology telenor Websites Windows xiaomiRecent Posts: MyOpenAdsTop websites in Myanmar, Nov 2014Archives July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 Copyright 2016. DigitalTimes.com.mm